Oololiwe baseSwitzerland bakumgangatho oPhezulu eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eYurophu > Oololiwe baseSwitzerland bakumgangatho oPhezulu eYurophu
loliwe Swiss ezingcono eYurophu ngokuvumelana Boston Consulting Group. Okokuqala, Swiss azuzwe amanqaku aphezulu nakuba kokushiya umgangatho. I-Swiss lazuza 7.2 ireyithingi iyonke ngenxa 10. ngelixa Denmark, Finlend, kunye Germany yonke iphunyelelwe a 6+ ukukala. Phakathi izilinganiso, kubalulekile ngakumbi ukukhankanya ukuba iBulgaria iphumelele inqanaba eliphantsi 1.9. Switzerland iphumelele rating yalo phezulu kuba amanqaku amanqaku apheleleyo kwi izinga lokusetyenziswa.
ubuhle engama lulahla koololiwe Swiss.
Ukongeza ekufezekiseni amanqaku aphezulu, Oololiwe baseSwitzerland bathathelwa ingqalelo njengexabiso elifanelekileyo lemali. Isalathisi okukala ngolu hlobo lulandelayo;
wenze ukuba 1
Jemani yaye Ostriya (6.1)
Sweden kanye Fransi (6.0)
wenze ukuba 2
ulinganiso lweenkcukacha kwaye i elamaDatshi (5.3)
Lugano ukuba Geneva Oololiwe
wenze ukuba 3
Romania and Bulgaria (1.9)
Yintoni eyenza loliwe Swiss kakhulu eYurophu?
Okokuqala, kukho izizathu ezininzi ezenza uloliwe Swiss bahamba kakhulu eYurophu. Hayi nje oololiwe Swiss ukunika ukuthembeka intle nokufika ngexesha eYurophu kodwa ke kuthathwa ukuba ephephile kakhulu ngenkonzo esemgangathweni. I-Swiss zezona abahamba ngololiwe rhoqo eYurophu nge 10,000 oololiwe isebenza ngemihla kwi 3000 inethiwekhi kaloliwe km. Uthungelwano kaloliwe Swiss unawo amandla ukusetyenziswa uphezulu eYurophu.
https://www://www.youtube.com/watch?v = D2wPhSjx09I
Kukho isizathu sokuba oololiwe Swiss ziye ubekwe inombolo 1 kusukela 2012. Amazwe kunye networks zoololiwe amancinane (phantsi 6,000 km) baye bonke babona izilinganiso zabo unokusinceda ngeli xesha. Oku kubandakanya iSwitzerland, Dominikha, Finlend, Norowe, inetherlands, yaye Laksembheg. La mazwe zinika ixesha eziphezulu, Ipesenti yomzila kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu kwaye unikezela ngeendleko ezisezantsi ngekhilomitha ngenkonzo yabo. Ngokulinganayo kubalulekile, ezi oololiwe amazwe iingozi ezimbalwa kunye nemeko leyo kuphucula amanqaku zazo zokhuseleko jikelele.
Iindawo ezigqibeleleyo zokundwendwela eSwitzerland ngoololiwe baseSwitzerland
Kukho iindawo ezininzi ezintle ukutyelela eSwitzerland nangona ubukhulu ayo. I-alps kunye ne-glaciers zezona zinto zinomtsalane kodwa abahambi bayayonwabela neyakudala iinqaba, kucace amachibi aluhlaza, kunye neendawo zasemaphandleni zebucolic. Naliphi na ixesha lonyaka ungakwazi ukunandipha bentaba, I-Ice skating, imikhosi ema e Switzerland. Ngaphezu, kukho ulwaphulo-mthetho olusezantsi kakhulu eSwitzerland olwenza ukuba lube yindawo ekhuselekileyo yabahambi. Iindawo ekufuneka zibonwe eSwitzerland zibandakanya iMatterhorn, Zermatt yeyona ntaba ifotwe kakhulu kwihlabathi. Okunye, IChateau de Chillon, Montreux i kufuneka-ukubona ukuba abakhenkethi. Le nqaba amanzi yamandulo ekukho 25 izakhiwo neentendelezo ezintathu yenye izakhiwo zembali kakhulu watyelela ehlabathini.
Incwadi uloliwe Swiss nge Gcina i Train
Ukuququmbela, kukho izizathu ezininzi kakhulu ukuhamba ngololiwe Swiss. Izikhululo Ukuqeqesha Switzerland avamise kakhulu kwizikhululo zikaloliwe elihle eYurophu. Ukuba ujonge iholide yothando okanye imizila oluhle, Switzerland indawo ukuya. ukuthatha 3 imizuzu ngoku babhukishe amatikiti uloliwe Swiss kwi zethu kulula-ku-sebenzisa ukuqeqesha site. Amatikiti zingathengwa Credit Cards, kunye neentlawulo ezininzi ezizezinye.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fswiss-trains-ranked-best-europe%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
I-SwissAlps	train Travel	indawo yokuhamba
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe eSwitzerland, Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uhambo lukaloliwe lwaseNetherlands, Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu